Ny kabinetra fanaparitahana herinaratra ambany herinaratra GGD AC dia mety ho an'ireo mpampiasa herinaratra toy ny foibe famokarana herinaratra, trano fisakafoanana, orinasa indostrialy ary mpampiasa herinaratra hafa toy ny AC 50HZ, 380V naoty nahazo naoty, naoty amin'izao fotoana izao ho an'ny 3150A rafitra fizarana herinaratra ho fitaovana, jiro ary fitaovana fanovana herinaratra , Fitsinjarana sy fifehezana. Ny vokatra dia manana fahaiza-manao mamaky be, manome isa fotoana fohy hanefana amin'izao fotoana izao hatramin'ny 50KAa, teti-pitetezana miovaova, fitambarana mety, azo ampiharina mafy ary firafitry ny tantara.
MNS karazana switchgear ambany voltika (eto dia antsoina hoe switchgear malefaka) dia vokatra izay atambatry ny orinasanay miaraka amin'ny firoboroboan'ny switchgear tsy misy herinaratra eto amin'ny firenentsika, manatsara ny fisafidianana ny singa elektrika sy ny firafitry ny kabinetra ary ny fisoratana anarana indray. Izy io.Ny toetran'ny herinaratra sy mekanika an'ny vokatra dia mahafeno tanteraka ny fepetra ara-teknikan'ny vokatra MNS voalohany.
GCK, GCL Low Voltage tsy azo alaina switchgear
GCK, andian-tsarimihetsika GCL azo alaina azo alaina azo averina ambany dia noforonin'ny orinasanay araka ny filan'ny mpampiasa. Izy io dia manana ny mampiavaka ny firafitra mandroso, ny fisehoany tsara tarehy, ny fahombiazan'ny herinaratra avo, ny haavon'ny fiarovana avo lenta, ny fiarovana sy ny fahamendrehana ary ny fikojakojana mety. Izy io dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny metalurgiie, solika ary simika. Izy io dia fitaovana fizarana herinaratra mety tsara ho an'ny rafitra famatsian-jiro ambany herinaratra amin'ny indostria toy ny herinaratra, milina, lamba ary ny sisa. Voatanisa ho toy ny vokatra atolotra ho an'ny fanovana ny tambajotra roa sy ny vokatra sivy fahasivy.